1-Qibrad iyo farxad
Waqtiga waxba ha eedayn.
Waqtiga wanaagsan farxad ayuu ku siiyaa.
Waqtiga xun qibrad ayuu ku siiyaa.
Qibrad iyo Farxad waad u baahantahay, labadaba waa u muhiim nolosha noolaha.
2-Qibrad iyo Dulqaad
Marka aan wayno waxa aan doonayno waa inoo shalaayto sida uu dareenkeena muujiyo dhabtase sidaa maahan, wixii aad wayso adiga oo doonayo waa kuu qibrad lagugu barayo dulqaadka.
Kuwa si dhab ah ugu kalsoonaado Alle mar walba wuxu siiyaa waxa ugu wanaagsan ee ugu barakada badan.
In wax walba lagu siiyo waxaa ka qiima badan in qalbigaaga laga buuxsho deeqtoonaan daganaan ku dheehantay, taas haddaad heshidna macna badan kuuma lahan tirada nimcada aad helaysid yaraan iyo badnaanba waad ku qancaysaa
Ka bari, Allahagaa mar walba qalbi addeeca wax walba ha kugu dhacaanee, maxaa yeelay ma wanaagsana qalbiga yahaysiga badan ee la gadgadoomaa xaaladaha nolosha.
5-Laba jeer hal qalad ma samayn kartid
Hubaal marka labaad ee aad isla qaladkii suubiso waa doorashadaada.
Mugdigu ma dheeraado ee mashaqadiisaa na maamusha.
Qorraxdu way soo baxaysaa Mugdi walba oo jira, ee musiibada waa mixnadda aan ka qabno cabsidiiisa (Mugdiga).
Wacnaan lahaydaa haddii aan wada dhalan lahayn inaga oo wada garan karna waxa inoo wanaagsan iyo waxa inoo xun, kan nolosheena ku haboon iyo kan khasaarada inagu ah, kan ina lug gooynaya iyo kan ina dhisaya.
9-Qof aan kuu qalmin
In aad isku murjisaa oo isku buuqisaa qof aan u qalmin xitaa in uu noloshaada qayb ka noqdo maba ahan, nolashu waa mid gaaban, marka in buuq looga faaidaysto ma mudna.
Marka uu noqdo qaabka noloshaada mid Alle ku xiran markaas Alle wuxuu ka dhigayaa noloshaada mid ku dabaqan Jacayl iyo Farxad loo aayo.
Neecowda ma casuumi kartid haddii aadan dariishadaha u furan, macnaha aan ula jeedo ayaa ah in wanaag aadan arki karayn haddii aan xagaaga laga arkin.
12-Nacaska iyo Caaqilka.
Nacaska su’aalihiisa waa ula muuqan karaan dadka qaar wax lagu yaqyaqsado oo waa is dhihi karaan yaan kan idinka aamusiya midkan, balse waa u xikmad uu wax ka kororsado caaqilka, sida uu nacasku caaqilka erayadiisa u quuto.
Mohamed Musa Sh. Noor
13- Muujinta dareenka
Sida aad doonta ha usoo tufo qalbigaaga waxa ka dhex guuxaya, waxaa hubaal ah in dareenkaga qalbigaaga muujintiisa aysan mararka qaar qaylo iyo dareen jismiba uusan ku filnayn muujintooda.
14-Maxaa dheertahay malaayiinta dhimata
Bal xusuusta iyo qiimaynta naftaada dib u celi kana fakar malaayiinta qof ee maalintii dhinta ayaga oo aan la ogayn, maxaad uga duwantahay maxaasa dheertahay, miyaysan ahayn kuwa sidaada oo kale lahaa hammiga iyo himadda nolosha aad ku taamayso, nasiibkaaga aad ayuu u wanaagsan yahay maanta ee jaaniskaaga uga faaiidayso gogol xaarka qurxoon ee barito.
Mohamed amusa Shiikh Noor
Ilaahey mar walba qof ayuu noloshaada ka siibaa ama ka reebaa, taa macnaheeda maahan in adiga lagugu dhibayo waa dantaada, balse adiga ma dareemi kartid sidaa darteed ka fakar waxa aad u oynayso ama ka daba cararaysid.
Haddiiba uu jiro masayr lagaa maseeray markaas wax wanaagsan ayaad suubisay ama suubinaysaa.
16- Mahadda eebe
Mahadda waxay u sugnaatay rabiga mar walba kuu taagan marka qof walba kaa tago.
17-Ladnaanta iyo barwaaqada
Ma ahan in ladnaanta iyo barwaaqada ay kula tagaan oo ku hilmaansiiyaan in aad tahay mar walba daciif baahi badan oo mar walba wax tabanaya, qofka caaqilka ah waa midka ay mar walba u tirsan yihiin waqtiyadiisa adkaa ee uu soo maray ee laga qafiifiyay dhibtii uu tabanayay.
Sidaas darteed mar walba ha hilmaamin waydiisashada aad rabigaa wax waydiisato, maxaa yeelay waxaa tahay Baahibadane mar walba baahan.
18- Kula dhaqan waaliddiintaada Kula dhaqan waaliddiintaada Jacayl iyo Naxariis
macnaha ay leeyihiin marka aad garan karto waa mar aadan waxba qaban karin.
Mohamed Musa Sgiikh Noor
19- Khayr iyo Shar
Wax walba oo nolosha aad kala kulantid waa saddex arrin oo kala ah khayr, shar, iyo cashar
Dadka qaar ayaa kuu shar ah khayrna kuu noqon karaa, afcaasha qaar ee aad samaysid ama lagugu sameeyana waa kuu cashar aad wax ka baratid.
Mararka qaar sida aan rabno aan u ducaysano aana u baahi badnaano, sida aan rabno aan u illin shubno , sida aan rabno aan u qalbi jabno, haddii ay noqoto jawaabta Alle maya,waa maya, maxaa yeelay Alle waa midka ugu jawaabta qurxoon inta jawaabta uguna doorid fiican.
21-Iimaanka iyo dhaqanka
Iimaankaaga kaama dhigo qof wanaagsan ee waa dhaqankaaga waxa ku wanaajiya.